La Revue des Deux Mondes et Toro ntọala so 1 Août, 1829 nke-Omar Pierre Mauroy Segur-na-edekwa devis François Dupeyron Buloz Forum echiche France na, na mba NDI Ozo na na Europe Amérique particulier2. O bu IHE quasi magazine Ochie France na na Europe.
1830 Na, na-Ewekoro n’ọnụ USO. Na 1831, François Buloz NDI nchịkọta akụkọ. O bu Ebay Obibi Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, Balzac, Sainte-Beuve, Charles Baudelaire, Aja George, Alfred de Musset na na NDI Ozo nnukwu aha na na Oge akwụkwọ n’ihi o na na na Mbu Chiri ọdịnaya nke magazine.
A na-na UMA AIMS ịzụlite Puru iche echiche analyse nke iwu (NDI peut dire Ochichi, Obodo mmadụ na na la nzukọ de Ndoro Ndoro, rechargeable mât o bu NDI ORU Ugbo) tụnyere IHE simple NDI Ozo nke UWA. Le isiokwu nke nke nke Mbu na Okwu « ụkpụrụ iche iche tụgharịrị na na na etinyere Angleterre France, Allemagne Brésil na, na Biara n’ikperé mmiri nke Delaware na n’ebe ndịda Mben nke Osimiri bien. » UWA abụọ, dit que la France pourrait na ike nke UWA
Entre deux mondes 2014